Trump oo laga qaadi waayey awoodda uu ku weerari karo Iran
Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa ku guul-darreystay inuu baabi’iyo awood diidmo oo madaxweyne Trump uu adeegsaday tallaabo ay isku raaceen xubnaha Congress-ka, oo xadidi lahayd awoodda uu ku weerari karo Iran.
Xubnaha Senate-ka ayaa cod 49-44 ah ku taageeray qaraarkan oo uu Congress-ka meel-mariyey horraantii sanadkan, taasi oo aan dhammeyn aqlabiyadda ah laba meelood saddex meel ama 67 cod ee loo baahnaa, si loo baabi’iyo awoodda diidmada Veto-ga ee madaxweynaha uu u adeegsaday wax uu ugu yeeray dadaal “aad gef u ah” oo lagu xadidayo awoodihiisa.
Qaraarkii la meel-mariyey Janaayo, oo ay wada taageereen Dimoqraadiga iyo Jamhuuriga, ayaa dhigayey in madaxweynaha uusan ciidamada Mareykanka u adeegsan karin dagaal ka dhan ah Iran ama qeybo ka mid ah dowladeeda ama militarigeeda, isaga oo aan ogolaansho ka haysan Congress-ka.
Tallaabadaas ayaa ka dhalatay cabsi ay xubnaha labada xisbi ka qabeen in Aqalka Cad uu halis ugu jiro inuu ku dhaco dagaal ka dhan ah Iran.
Trump ayaa bishii Janaayo amray weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn oo lagu dilay Jeneral awoodd badan oo u dhashay Iran, Qassem Soleimani, xilli uu ku sugaan meel u dhow garoonka diyaaradaha Baghdad.
Dilkaas ayaa sare u kiciyey xiisadda ka dhex oogan laba dal.
Soleimani ayaa loo arkay inuu ahaa maskaxda dhaq-dhaqaaqyada xasillooni darrada ah ee Iran ay ka waddo caalamka, hase yeeshee xubnaha Dimoqraadiga iyo khuburada ayaa cambaareeyey go’aanka lagu dilay, oo ay ku qeexeen mid daan-daansi ah.
Maamulka Trump ayaa sheegay in tallaabadaas ay Iran ku celisay barteeda.